Apple Pay ING Australia, Apple Watch Series 3, Apple Park, na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na SoydeMac | Esi m na mac
Anyị nọ na Sọnde ikpeazụ nke ọnwa a dị mkpirikpi nke ọnwa Febụwarị ma anyị nwere ike ikwuworị na ọ bụ ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu gbasara akụkọ gbasara Apple. Ọnwa nke February anaghị enwekarị mmasị maka ndị ọrụ Apple mana n'ọnwa a anyị nwere ike ịchọta nkọwa dị mkpa iji mee ka ọ pụta ìhè na ihe omume na -adịbeghị anya na -eme na -akpaghị aka. O yighị ka nke a ga -abụ afọ mgbanwe ma ọ bụ nwayọ maka Apple mgbe a bịara na akụkọ banyere akụrụngwa ya na akụkọ ya, n'eziokwu ọ nwere ike bụrụ ihe omume karịa ka anyị niile tụrụ anya ya.
Mana anyị ga -ahapụ oge ka anyị hụ mmalite nke amụma ndị a yana mgbe anyị na -ahụ isi ihe n'izu a nke ihe omume na -amalite, n'aka nke ọzọ, ebe Apple anaghị anọ "n'ime ahụ", mana na -efegharị ya mgbe niile, Mobile World Congress na Barcelona.
Nke mbụ anyị nwere mmejuputa iwu nke Apple Pay na ụlọ akụ nke anyị niile maara nke ọma, ING, ụlọ akụ a na Macquarie enyela nkwado maka Ịkwụ ụgwọ Apple Pay na Australia. Anyị enwere ike ịnọ nso ịhụ mmejuputa Apple Pay na ụlọ akụ ọhụrụ a na Spain?
Enwekwara okwu na afọ a ndị Cupertino nwere ike megharịa Apple Watch na malite usoro 3. N'okwu a, ọ bụ maka ibido ụdị elekere ọhụrụ nwere enyo dị iche karịa nke ugbu a, mana ekwuru na ọ ga -abụ n'ihi onye na -ebu ngwaahịa ugbu a enweghị ike imezu ihe achọrọ na Apple ga -ahọrọ ịchọ ndị na -eweta ndị ọzọ. Anyị ga -ahụ ka ihe a niile siri dị.
Ozi na -esote bụ na N’ikpeazụ Apple jisiri ike weghara weebụsaịtị iCloud.net. Na mbụ ngalaba a ka nọ n'okpuru obere netwọk mmekọrịta China ruo mbido ọnwa Febụwarị, mana n'ikpeazụ ụlọ ọrụ teknụzụ akwụgola ụgwọ maka inweta ya.
N’ikpeazụ anyị enweghị ike ichefu maka ogige apụl. Apple ekwuola na saịtị a ebe ejiri ama ama ama ama na Apple Campus 2 ma ọ bụ “oghere”. a ga -akpọ ya ogige apụl a ga -agwụkwa akụkụ mbụ nke ọrụ ndị ahụ na Eprel na -esote, ka ndị ọrụ wee nwee ike ịmalite njem n'ụbọchị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple Pay ING Australia, Apple Watch Series 3, Apple Park, na ọtụtụ ndị ọzọ. Kachasị mma izu na SoydeMac